Madaxwaynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay gaaeeridii Dr Jimcaalle. – Radio Daljir
Madaxwaynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay gaaeeridii Dr Jimcaalle.
Garowe, May 07 -Madaxwaynaha dowladda Puntland Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Dr Cabdi Xasan Jimcaale oo ahaa wasiiru dowlaha dastuurka iyo arimaha faderaalka Puntland oo galinkii hore ee saacadda Geeska Afrika ku geeriyooday isbitaal ku yaala London.
Madaxwayne Faroolle oo waraysi siinayay Laanta Afka Soomaalida ee BBC -da ayaa ku tilmaamay geerida Dr Jimcaalle mid siweyn uga naxeen shacabka Puntland.
Madaxwaynaha ayaa sidoo kale marxuumka Eebbe uga baryaya janadii Fardowso inuu ka waraabiyo eheladii, qaraabadii iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee uu ka tagay Samar iyo Iimaan uu ka siiyo.